Gannat Zawudee (PhD): ‘Barumsa sadarkaa tokkoffaa miti lammaffaanu afaan dhalootaan ta’u qaban jedha' - BBC News Afaan Oromoo
14 Fuulbana 2019
Image copyright Embassy of Ethiopia, New Delhi
Ayyaana waggaa haaraa sababeeffachuun namoota maqaan isaanii miidiyaa irraa fagaatee ture iyyaafanneerra.
Isaan keessaa imaammatni barnootaa haaraan yommuu ka'u maqaan isaanii waliin kan yaadatamu Gannat Zawudee [PhD] waliin gaaffif deebii taasifne qabannee dhiyaanneerra.
Bara 1993 dura Keeniyaa yuunvarsiitii Keeniyaataatti 'external examiner' [Yuunvarsiitiin biraa irraa nama ramadamuun qormaata nama kennu] tahuun tajaajilanii ture. Yeroo sana Yuunvarsiitii Finfinnee keessa hojjechaa turan.
Itiyoophiyaattis Itti aantuu Ministira Barnootaa tahuun erga hojjetaa turanis bara 1992 irraa eegaluun ammoo Ministira Barnootaa tahuun tajaajilaa turaniiru.
Aadde Azeb Masfin waa'ee abbaa warraa isaanii waan jedhan
Digirii jalqabaa fi lammaffaa isaanii Ameerikaa Yuunvarsiitii Niwu Haampishaayeri fi Suufoolki Yuunvarsiitiidhaa damee Biizinasiidhaan eebbifaman.
Digirii 3ffaa isaanii ammoo Hindi Yuunvarsiitii Jawaaharlaa irraa Hariiroo Idila Adunyaa [International Relation] kan argatan yoo tahu Itiyoophiyaattis dubartii jalqabaa Ministira Barnootaa tahun kan hojjetanidha.
Dabalataan kitaabota lama ''Itiyoophiyaatti qabsoo dubartootaa kan jedhuu fi kan lammaffaan Afaan Ingiliffaan qofa kan bahe ''No One Left Behind'' kan jedhu barnoota irratti kan xiyyeeffatudha jedhame maxxansiisaniiru.
Turtiin BBC waliin taasisan kunooti.
Amma maal hojjechaa jirtu?
Amma ergan soorama bahee waggaa sadii taheera.
Ergasii imaammata misooma dubartootaa hundeesseen qorannoo garaagaraa hojjechaa jira.
Jireenya dubartootaa irratti qorannoon gaggeessa. Yeroo tokko tokkos leenjii gaggeesummaafi hojii uumuu irratti xiyyeeffatu kenninaaf.
Sagantaa Miidiyaa irratti darbu qabduu?
Sagantaa Televizhinii qaban ture. ''Ye Hiywot Weg'' sagantaa jedhamu kan Televizhinii Waaltaa irratti darbudha.
Amma yeroo gabaabaaf sababa hanqina ispoonsaraaf jecha addaan cite malee waggaa tokkoof darbaa ture. Mariin garaagaraa jireenya dubartootaa ilaallatu achi irratti darbaa ture.
Waggoota dheeraaf barnoota irratti hojechaa waan turtaniif as irratti wanti hojjechaa jirtan jiraa?
Umurii kanaan hin gahu jetteetii! [kolfa]. Qorannoowwan, sosochii garaagaraa fi leenjiiwwan jiru. Jaartiidhaaf kun hin gahu jettteetii?
Umriin keessan meeqa? Tarii umuriin hin gaafatamu jedhama……
'Barnoota keenya al takkaa dhaabbannee haa ilaallu'
Rakkoo hin qabu.. ani amma abbaa warraa waan hin barbaanneef [kolfa] umuriin koo waggaa 71 dha.
Gorsituu taatanii hojjettanii beektuu? Lakki! Nama na gaafateef garuu ijoollummaa, dubartummaa fi kaan irratti nan gorsa.
Imaammatni Barnootaa bara hoggansa keessanii irraa eegalee dadhabaa deeme jedhamuun yeroo qeeqamu dhagahama. ''Ijoolee Gannat Zawudee'' maqaan jedhamus kennameeraaf. Kana dhaggeessanii beektuu?
Nan dhagaha, garuu an keessaa hin qabu. Imaammata barnootaa keessaa bahee Hinditti waggoota kudhaniif dippilomaatii taheen hojjetaa ture.
Amma erga soorama bahee waggootni sadii darbaniiru. Kanaafuu waggoota 13'f imaammata barnootaa kana irraa fagaadheera jechuudha.
Osoon yeroo qabaadhee gadi taa'ee inni jedhamu dhugaamoo soba jedhee qoradheera tahe natti tola. Garuu akkas hin goone. Amma immoo qorachuuf dulloomeera.
Waan natti fakkate barreessee kanaan dura kaa'eera. Dhalootni ammaa immoo wal harkaa fuudhee qaqajeelchuun hojii irra oolchuu danda'a.
Yeroo Ministira Barnootaa turtan sabaa fi sablammootni afaan itti hiikkatan afaan haadha isaaniin akka baratan kan yaada dhiyeesse isin jedhama. Maal jettu kana irratti?
Kun waanuma callisee sammuukootti dhufe miti. Xiyyeeffannoo UNESCO kan idila adunyaati.
Akkuma barnootni ammayyaa babal'ataa dhufeen qorannoowwan hedduun bahaa turan. Ijoolleen afaan haadha isaanii kan itti afaan hiikkataniin jalqaba barachuu qabu.
Dhalli namaa kan yaaduu fi xiinxalu afaan ittiin afaan hiikkate [afaan haadha] isaani. Kanaaf ani Gannat qofti kan ofumaan gadi buusan miti.
Yeroo sana akka falmaa turtantu yaadatama
Baay'ee, baay'ee!....ammas tahu fuuldurattis kana irratti nan falma. Sitti himuu?
Barnoota sadarkaa tokkoffaa qofa miti, kan sadarkaa 2ffaa iyyuu akkas akka tahu ammumaan jalqabnee itti yaadnee, akkaadaamii afaanii hundeessaa, suuta jennee Yuunvarsiitiiwwanis afaanuma afaanuma isaaniin akka barsiisan gochuu qabna. [Muuxannoo biyya Hindii kaasuu].
Akkas tahuun rakkoo hin qabu jettanii yaadduu?
Eyyee! Rakkoon ni dhufa. Kan rakkoo hinqabne jiraay? Rakkoo hiikaa deemna malee rakkoo qaba jennee rakoo baqachuu qabnaaree?
Afaan gaaffii eenyummaa qofa osoo hin taane gaafa gara saayinsiitti, barnootaatti fidnu meeshaa guddaadha.
Haala qabatamaa biyya keenyaan akkas tahuun isaa adda nu hin baasuu?
Waliin afaan tokko qabnaam! Afaan federaalaa Amaariffaafi Ingiliffadha. Barnoota irratti immoo afaan Ingiliffaas miti.
Daa'ima waggaa shanii fi jahaa afaan isaan burraaqee guddate fiddee kutaa tokko galchitee afaan gara biraan baradhu jechuun sirriidha jettaa?
Kana qofaa osoo hin taane kun daa'imaaf ni taha jettaa? Waan salphaa miti. Daa'imni afaan isaa waliin wal qabata.
Asallaafi Sabbataan kanneen Afaan Oromootiin hin barsiifne irratti murtii dabarsan
Ani akka waan salphaa tokkootti hin ilaalu. Maaliif salphisanii akka ilaalan naaf hin galu malee.
Mee jireenya dhuunfaa keessanii nu haasofsiisaa.
Haadha ijoollee dubaraa lamaati. Amma immoo ijoolleen koo lamaan iyyuu akkoo ijoollee sadii na godhaniiru.
Jireenya kootti gammadeen jiraadha… 'I am happy with my personal life'. Gaa'ila koo akkan diigeeru beekta jedheeni. [Kolfa]. Garuu gammadeen jiraadha. Ijoolleekoo waliin hariiroo gaariin qaba.
Keessumaa ijoollee ijoolleekoo waliin…isaan waliin jaalalaanan dabarsa. Yeroon bilisa qabu isaan waliinan tura.
Hiriyyota koo lubbuun jiran waliinis akkasuma nan dabarsa. Dubbisuu nan jaaladha kanuma jireenyi koo.
Kitaabota akkamii dubbistu?
Kitaaba kamiyyuu. Biyya keessattis kan biyyota kaanitti maxxananis, dinagdee, barnoota irratti kaanis.
Yeroon dargagummaa irra ture asoosama dubbisuun jaalladha ture. Amma garuu nan dulloome. [Kolfa].
Filannoon keessan garuu kam fa'a ture?
Yeroo keenya 'Agaataa Kiristii, Danellaa Istiil', Itiyoophiyaa keessaa immoo 'Fiqir Iske Meqaabir' Fiqir Iske Meqaabir yeroo sadiin irra deebi'ee dubbise.
Yeroo sadiin yeroon dubbise waan haaraa keessaa argadheera.
Imaammata afaanii moo kan barnootaatu dursuu qaba?
Akkasumas kitaabota kanneen akka 'Oromaay', 'Wenjelenyaaw Daanyaa' dubbiseera. Dur akkoon koo kitaaba dubbisti ture, Anaanis akkan kitaaba dubbisu kan na barsiifte isheedha.
Muuziqaa fi Iskistaa baay'een jaalladha. Ammayyuu jira Iskistaan, xiqqoo dulluma waliin jilbi koo akka durii miti malee.
Aster, Buziyyee, Xilahun Gessesee ,fi keesumaa immoo walaloo Bazzaawarqi baay'een jaaladha.
Walaloo ishee tokko kitaaba koo tokko keessatti iyyuu caqaseera jedhan.
''Yemaannesh yilunyaal ,yemaan libelaachaw (Ati kan enyuuti naan jedhu, kan eenyuudhan jedhaanii)
Bichaayen biqaris, min ascheneqaachaw'' (Osoon qofaa hafes, maaltu isaan dhiphise)
Sababa addaa qabduu?
Maaliif seete? Ani yeroo hundaa dubartoota waliinan wal qabsiisa. Ati kan eenyuuti? Kan namaatiim ati!
Meeshaadhamoo? Meeshaa dhiiraati jechuudhaam.
Sagalee ishees nan jaalladha. Warra haaraa keessaa immoo Teedii Afroo natti tola jechuun gaaffiifi deebii BBC waliin taasisan xumuran.
Barnoota: 'Itoophiyaan imaammata barnootaa qopheessaa jirtuuf muxannoo argatteetti'
29 Amajjii 2019
Imaammata barnootaa: Imaammata afaanii sirrii ta'e qabaachuun ni dursa
Aadde Azeb Masfin: 'Gara caalu soorama Mallasif kennamun of jiraachisaa ture'
13 Fuulbana 2019
Magaalaan Asallaafi Sabbataa manneen barnootaa Afaan Oromootiin hin barsiifne irraa eeyyama fudhachuuf
26 Hagayya 2019
'Galgala gammachuurraa kan ka'e hirriba malee bulle'
US loltootashee gara Saawudii Arabiyaatti erguuf
Dhukkubsattuu kaansarii osoo addaan hinkutiin km200 galaana daakte
Danaan fuula nama durii hojjatame
Addunyaa baraaruuf sagaleen biyyoota gara garaarraa dhaga'amaa jira
Dararuumoo seera kabachiisuudha?
Hogganaan al-Shabaab du'eera jedhame lubbuun jiraachuun himame
Kilaba kubbaa miilaa maatii Bin Laadiin waliin bizinasii hojjachuuf jedhu